Lomano – «Vive l’avenir» : 278 ireo nisoratra anarana hifaninana | NewsMada
Lomano – «Vive l’avenir» : 278 ireo nisoratra anarana hifaninana
Hiditra amin’ny andiany fahavalo, ny fifaninanana lomano «vive l’avenir». Fihaonana karakarain’ny klioba St Michel, izay hotanterahina etsy amin’ny dobo filomanosana ANS Ampefiloha, ny asabotsy 7 avrily sy ny alahady 8 avrily, ho avy izao. Hahatratra 278 mianadahy, ireo mpilomano hifaninana, amin’ity.
«Manome sehatra ny tanora izahay, amin’ny fitsinjovana ny hoavin’izy ireo sy ny fanatanjahantena malagasy. Ilaina, araka izany, ny mampahalala ny talentan’ireo kilonga, amin’ny fanaovana fifaninanana toa izao», hoy Rajaona Rabary, filohan’ny klioba Saint Michel Amparibe, omaly, nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny foibe toeran’ny Croix-rouge malagasy, tetsy Tsaralalana.
Nambaran’ny mpikarakara fa hotontosaina ny asabotsy tontolo andro, ny fifanintsanana rehetra, raha ny tapakandro marain’ny alahady kosa ny dingan’ny famaranana sy ny famaranana.
Klioba 12, avy amin’ny ligim-paritra efatra no nandefa solontena hifampitana, mandritra ireo andro roa hifaninanana. Hisy ny fifanintsanana, eo amin’ny halavirana 100 m ary famaranana eo amin’ny 50 m. «Anisan’ny klioba matanjaka amin’ny lomano, eto Madagasikara ny Saint-Michel, ary mila manaporofo izany», raha ny nambaran-dRasolonjatovo Charles, sekretera jeneralin’ny klioba. Notsiahiviny fa manana anaram-boninahitra 18 amin’ny 34 niadiana nandritra ny fifaninanam-pirenena, teo ity klioban’Amparibe, ity. Anisan’ny nandrombaka medaly betsaka, tamin’izany, Rasolonjatovo Mika, izay nahazo 9, raha 4 ny an-dRabarijaona Murielle.
Marihina fa mahatratra 98 ireo mpilomano manana kara-pilalaovana ao amin’ny Saint-Michel.